Sacuudiga Oo Meel-Mariyay Sharci Ka Farxiyay Ajanabiga Ka Xoogsada Gudaha Dalkaasi. – Borama News Network
Sacuudiga Oo Meel-Mariyay Sharci Ka Farxiyay Ajanabiga Ka Xoogsada Gudaha Dalkaasi.
Sacuudi Carabiya ayaa meel marisay sharci in badan la sugayey oo ku saabsan in meesha laga saaro nidaamka ‘Kafaala’ ama kafaala-qaadka ee shaqaalaha ajnabiga uu qof wakiil uga noqonayey.
Shaqaalaha ajnabiga ee Sacuudi carabiya ku sugan waxaa horay loogu xiri jiray iney oggolaasho iyo kafaala-qaadba ay ka helaan cidda ay u shaqeynayaan.
Haddii shaqaalaha iyo qofka loo shaqeynaya uu khilaaf ka dhex dhacana ay dhici jirtay in shaqaalaha kafaala-qaadka lagala noqdo taasina ay keento inuu si sharci ah dalka Sacuudiga uu uga shaqeysan karin.
Bishii Novebmer ee sanadkii hore, wasaaradda shaqada iyo horumarinta bulshada ee dalkaasi waxay ku dhawaaqday iney meel marineyso qorshe ay wax kaga beddeleyso nidaamki kafaala-qaadka ee shaqaalaha ajnabiga lagu xirayey.
Nidaamkaasi oo dhigayey inuu qofka shaqaalaha ah qofka ama cidda uu u shaqeeyo oo keli ah uu rusqada shaqada iyo degganaashaha Sacuudiga uu u cusbooneysiin karo ama uu ka joojin karo.
Sacuudiga wuxuu sheegay inuu qaaday xayiraadihi ugu waaweynaa ee shaqaalaha ajnabiga ah ka saarnaa inuu helo sharciga shaqada iyo degganaashaha dalkaasi.
Dalka Qadar ayaa horay ugu dhawaaqay inuu wax laga beddelay sharciga shaqaalaha ee Ajnabiga ah ee ka soo jeeda dalka Nigeriya, iyada oo ka duuleysay dhibaatooyinkii ka dhacay Lubnaan.
Kooxaha u dooda xuquuqda shaqaalaha waxay ku doodayaan nidaamkaasi inuu shaqaalaha gaar ahaanna kuwa dhismaha ama guriyaha ka shaqeeya ee aadka u nugul iney shaqaalaha u shaqeeya ku xadgudbaan.
Xadgudubyada ay u geystaanna waxay ku sheegeen iney ka mid yihiin iney baasboorrada ka qaadaan, iney saacado dheeri ah shaqeeyaan iyo iney u diidaan lacagihi ay ku shaqeeyeen.
Nidaamka cusub ee ay Boqortooyada dib u habeynta ku sameysay shaqaalaha soo galootiga ah wuxuu dhigayaa shaqaalaha iney shaqooyinkooda wadan karaan ilaa uu ka dhaco heshiiska shaqo ee lala galay.
Shaqaaluhu sidoo kale waxay awoodi doonaan inay wareejiyaan shaqooyinka inta uusan dhammaan qandaraaskooda shaqo haddii cidda ay u shaqeynayaan wakhtigi looga talagalay ku wargeliyaan.
Shaqaaluhu sida oo kale waxay helayaan xorriyad ay ku safraan iyaga oo aan wax fasax ah uga baahan cidda ay u shaqeynayaan.
Hay’adaha dowliga ee arrimahan u xilsaaran waxaa kale oo ay sheegeen in sida oo kale shaqaalaha ajnabiga ah ee aan la siinin qandaraas shaqo ama mushaaraadkooda la siinin loo diyaariyey shuruudo.
Qaar ka mid ah waddamada Khaliijka ayaa sanadihi u dambeeyey isbeddello ku sameeyey nidaamka ‘kafaala’ (kafaala-qaadka) ee shaqaalaha wakiilka uga noqonaya qofka uu u shaqeeya, arrintaasi oo ahayd mid ku baahsan lixda waddan ee xubinka ka ah golaha iskaashiga khaliijka.
Dadka dhaleeceeya arrintan waxay sheegaan xadgudubyada iney sii socon doonaan, ilaa iyo inta ay shaqada iyo fiisooyinka dagganaashaha ay ku xiran yihiin ‘Kafiil’ ama qofka shaqaalaha kafaala-qaada.
Maxay Ka Wada Hadleen Madaxda Maamulada Jubland Iyo Puntland Iyo Midawga Murashaxiintu
Dowlada Iran Oo Shaacisay Cida ka Denbaysay Weerarkii Lagu Qaaday Markabkeeda
Qaramada Midoobay Oo Doorashada Soomaaliya Ku Bixinaysa Malaayiin Doollar
Bnnstaff Bnnstaff August 9, 2021
Golaha Wakiilada Somaliland Oo Mar Kale Dib U Ansixiyay Xeerka La Dagaalanka Maandooriyaha
Bnnstaff Bnnstaff January 4, 2021 January 4, 2021
Nimcaan Hilaac “khilaafkii Xidigaha iyo Mursal Muuse muxuu ka yiri” 260
Mustafehaji July 14, 2021